ပကာသနမဖက်ဘဲ သဘာဝအတိုင်းသွားချင်သူ ကိုဝဏ္ဏ | အံ့ဘုန်းမြတ်
စာနယ်ဇင်း, စာပေ, သတင်း, သတင်းဓာတ်ပုံ, အနုပညာ, ဆောင်းပါး
အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိလာသောနိဗ္ဗာန်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်သို့ ကိုဝဏ္ဏ၏ ရုပ်အလောင်းအား ၀ိုင်းဝန်းပြီး အထူးနိဗ္ဗာန်မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှ ပြောင်းရွှေ့သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ရောက်ရှိလာသောအသက် (၈၀) နှစ်အောက် သယ်ဆောင်သောနိဗ္ဗာန်မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ရေဝေး သုဿန်အအေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တော့သည်။ ကျွန်တော်၏ အတွေးထဲတွင် စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ ကိုဝဏ္ဏသည် ဖခင်ဖြစ်သူဦးသာဓုထူထောင်ခဲ့သော သဘာဝအုပ်စု၏ အစ်ကိုအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်နှင့်အညီအများနည်းတူ သဘာဝကျကျ နောက်ဆုံးခရီးကိုသွားချင်ခဲ့သူတစ်ဦးများ ဖြစ်လေ ပြီလားဟု . . . . ။
စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာ ကိုဝဏ္ဏ အသက် (၆၅) နှစ်၏ ဈာပနအခမ်းအနားအား ၁၃.၁.၂၀၁၁ (ကြာသပတေး) နေ့ နေ့လည် (၃း၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရေဝေသုဿန်၌ မီးသဂြိုလ်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ Share this:PrintFacebookRedditEmailTwitterLike this:Like Loading...
Journalist.	View all posts by ahuntphonemyat »	« စာရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ မောင်ဝဏ္ဏမောင်ကွယ်လွန်
ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုများကို လွတ်လပ်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီဖွဲ့ရေး ပါတီနှစ်ခု တောင်းဆို »